शारी*रिक स*म्पर्क पछि वी*र्य किन बाहिर निस्कन्छ ? यस्तो छ डाक्टरको भनाइ ! - News Bihani
पुरुषले चरमसुख पाउने हाराहारीमा लि*ङ्गबाट एक प्रकारको सेतो तरल पदार्थ निस्कन्छ जसलाई हामी वी*र्य भन्छौं । यही वी*र्यमा शुक्र*कीट हुन्छ । एकपटक वी*र्य स्ख*लन हुँदा यस्तै ३ देखि ५ मिलिलिटर (५ मिलिलिटर भन्नाले १ चिया चम्चाजति) वी*र्य निस्कन्छ । वी*र्यमा हुने शुक्र*कीटको संख्या संधै एकैनासको नहुन सक्छ । शुक्र*कीटको संख्या ४ देखि १२ करोड प्रति मिलिलिटरसम्म हुनुलाई सामान्य मानिन्छ । हामीले देख्ने वी*र्यको सानो अंशमात्र शुक्र*कीटले ओगटेको हुन्छ । वी*र्यमा शुक्र*कीटको मात्रा यस्तै २ देखि ५ प्रतिशत मात्र हुन्छ ।
कुनै पुरुषले महिलाको यो*निमा वी*र्य स्ख*लन गरेपछि स्ख*लित वीर्य तथा यो*नि रस बिस्तारै बाहिर आउँछ, यो स्वभाविक हो । यसरी वी*र्य यो*निबाट बाहिर निस्कनुले पर्याप्त मात्रामा वी*र्य स्ख*लन भएको कुरालाई संकेत गर्छ । तपाईंको यौ*न आसनमा पनि कुनै समस्या छैन । त्यसैले तपार्इंले चाहेसम्म यसलाई रोक्नुपर्ने आवश्यकता छैन । तपाई वा तपाईंको श्रीमान्लाई तन्नामा वी*र्य लाग्दा असजिलो लाग्छ भने यौ*न स*म्पर्कपछि कुनै कपडाले पुछ्न सक्नुहुन्छ । तपाईंले अन्डरवेयरभित्र लगाइने सानो स्यानिटरी प्याड वा लाइनर पनि लगाउन सक्नुहुन्छ ।